Axmed Godane oo la xajiijiyay inuu dhintay & Dowladda FS oo soo dhawaysay | Keydmedia
Axmed Godane oo la xajiijiyay inuu dhintay & Dowladda FS oo soo dhawaysay
Washington (KON) - War Saxaafadeed Goordhow kasoo baxay Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyay in Axmed Godane, Hogaamiyaha Kooxda Al shabaab lagu dilay Weerarkii Cirka ee ka dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose.
Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa shaacisay Warkan Maanta oo Jimcaha, oo sidoo kale lagu sheegay in Dilka Godane oo noqon doono Qodax ka baxday Khatarta weyn ee uga sooo food lahayd Al shabaab.
Pentagon-ka ayaa ku tilmaamay Dilka Axmed Godane, mid noqon doonaa Dharbaaxo weyn oo ku dhacday Al shabaab, oo Mareykanka ku daray Liiska Argagaxisada February 26, 2008.
Afhayeenka Dowladda Soomaaliya ayaa u sheegtay KON in RW C/wali & Golahiisa Wasiiradda Goordhow ay ka hadli doonaan Warka kuu saabsan Geerida Axmed Godane.
UPDATE 8:20PM: Wasiirka Arrimaha Gudaha, C/llaahi Goodax Barre ayaa u sheegay KON in ay Shacabka Soomaaliyeed ee Nabada jecel u tahay Akhbaar Farxad leh Warka ku saabsan Geerida Axmed Godane.
"DFS Goordhow ayay kala cadeyn doontaa in Godane uu nool yahay & in lagu dilay Weerarkii Isniintii ay Drones-ka Mareykanka ka fuliyeen Gobolka Shabeellaha Hoose, War Saxaafadeed bay Xukuumadda kasoo saarii doonta Warka kasoo baxaya Mareykanka," ayuu yiri Godax oo KON Teleefoonka ugu waramay.
Axmed Godane oo Da'diisu ahayd 37 Sano, ayaa ahaa Hogaamiyaha Al-shabaab ilaa 2008-deedii xiligaas oo ay weerar midkan oo kale ah Mareykanka ku dileen hogaamiyhihii hore ee Al-shabaab Aden Xaashi Cayrow.
UPDATE 8:30Pm: Madaxweyne Xasan Sheekh oo soo dhaweeyay Warka ku saabsan in Axmed Godane lagu dilay Weerarkii Mareykanka ee Gobolka Sh/Hoose ka dhacay Isniintii lasoo dhaafay.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha DFS Xasan Sheekh Maxa'uud, ayaa lagu sheegay in Dowladda ay soo dhaweynayso dilka Hogaamiyihii Shabaab, Axmed Cabdi Godane.
Kadib iskaashi buuxa oo dhex maray Dowladda Soomaaliya iyo Dowladda Mareykanka, toddobaadkan gudihiisa waxay ciidammada Mareykanku weerar ku qaadeen kolonyo baabuur ah oo uu la socday Hoggaamiyihii kooxda arga-gixisada ah ee al Shabaab, Axmed Cabdi Godane iyo rag isaga la shaqeeya.
Waxaan xaqiijinnaynaa in markii weerarku dhacay dadkii kolonyadaas la socday aan qofna ka badbaadin.
Al Shabaab oo hore looga qabsaday degaannadii ay xoogga ku joogeen haddana la dilay hoggaamiyahoodii waxaan u aragnaa in uu macnaheedu yahay in uu dumay mid ka mid ah tiirarka colaadda Soomaaliya.
Sidaa darteed ma aragno sabab ay dhallinyarada Soomaaliyeed u sii wadaan dagaal ay maalmo koobani ka hareen. Waxaan dhallinyarada la marin habaabiyay ugu baaqeynaa in ay hubka dhigaan, kana tanaasulaan shirqoolka iyo falalka lidka ku ah nabadda iyo xasilloonida dalka taas oo waddada u xaareysa in si buuxda looga howlgalo dib u dhiska dalka.
Waxaan uga digeynaa qof kasta oo isku daya in uu qaato kaalintii Axmed Godane si uu u sii wado falalkii gurracnaa ee uu ku howlanaa Axmed Godane, in Dowladda Soomaaliyeed iyo saaxibbadeed ay ka qaadi doonaan tallaabo la mid ah tan Axmed Godane laga qaaday.
Dowladda Soomaaliya waxay uga mahadcelineysaa Dowladda Mareykanka iyo shakhsiyaadka ka tirsan ciidammada amniga Soomaaliyeed ee gacanta ka geystay howlgalkaas guusha ku dhammaaday.
Warbixin Filo Goordhow.